Mudo intee la’eg ayay u baahan tahay AC Milan si ay markale u noqoto koox weyn? _ Boban ayaa ka jawaabaya – Gool FM
Mudo intee la’eg ayay u baahan tahay AC Milan si ay markale u noqoto koox weyn? _ Boban ayaa ka jawaabaya
(Milan) 08 Okt 2018. Laacibkii hore kooxda AC Milan ee reer Croatia Zvonimir Boban ayaa ka hadlay mudada ay u baahan tahay kooxda Rossoneri, si ay dib ugu soo laabato sida ay ahayd dhowr sano kahor.
Kooxda Milan ayaa u muuqata in haatan ay ku socoto wadada saxda ah tan iyo markii uu kooxda tababare ka noqday Gennaro Gattuso, iyo sodoo kale imaatinka Gonzalo Higuain, Leonardo iyo Paolo Maldini.
Hadaba Boban ayaa yiri: “Waxaan rajeynayaa in xilli ciyaareedkan uu noqdo taariikh cusub ay kooxda yeelan doonto, seddex ama afar sanno gudahood ayaan mar kale ku arki karnaa Milan sida ay ahayd sanooyin kahor”.
“Lakiin waxaan u baahanahay shaqo badan, waxaan u rajeynayaa inay guuleysan doonaan”.
“Leonardo iyo Paolo Maldini waxay shaqada ku bilaabeen si wanaagsan, wax walbana waxay dhigeen booskii uu lahaa, sababtoo ah si wanaagsan ayay u garanayaan kubada cagta, natiijooyin wanaagsan ayaa imaan doona balse waxay ku xiran tahay waqtiga”.
“Ma fahmin ilaa iyo haatan sababta loo sameeyay tartanka UEFA Nations League” _ Jurgen Klopp
Kadib Manchester United, koox cusub ee ka mid ah kuwa waaweyn ee Yurub oo ku fikireysa saxiixa Zidane